प्रवासीहरूको राजनीतिक संस्कार र अवको मार्गचित्र – Nepal Japan
नेपाली समय : 02:07:23
जापानी समय : 05:22:23
प्रवासीहरूको राजनीतिक संस्कार र अवको मार्गचित्र
12 October, 2017 16:31 | बिचार | comments | 200850 Views
मदन चापागाई, जापान
आज हामी नेपालीहरू विश्वका अधिकांश मुलुकमा रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न व्यवसायका लागि खाडी राष्ट्र, युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया लगायत विकसित मुलुकमा छौ । हामी विदेश आएर पनि नेपालमा झै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झन्डा बोकी ज़िन्दावाद र मुर्दावाद साथै एक पार्टी समर्थक र अर्को पार्टी समर्थकबीच गालीगलोज अनि एकै पार्टीभित्र पनि गुट, उपगुटमा विभाजित रहेको तीतो यथार्थ छ ।
अनि विश्वका हरेक एयरपोर्टबाट नेपाली नेतादेखि हरेक व्यक्ति अपमानित भएर फर्कनुपरेको छ । हो आज म यही विषय र अबको हाम्रो बाटो कस्तो रहनु पर्छ यसको चित्र कोर्ने अनुमति चाहन्छु ।
वास्तवमा नेपालमा उच्चशिक्षा प्राप्त गरेको शैक्षिक जनशक्ति र सामान्य रूपमा १० कक्षासम्म मात्र अध्ययन गरेका व्यक्ति वा पढ्दै नपढ्का व्यक्ति विगत लामो समयदेखि विदेशिनु परिरहेको छ । यो अवस्था देशमा भएको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धबाट तिव्र रूपमा सुरू भएको र देशमा गणतन्त्र आएर नयाँ संविधान निर्माण भइसक्दा पनि नघटेको देखिन्छ । हरेक तहको व्यत्तिmले पनि दुख गरेरै विदेशमै गएर रोजगारी गरी आफू र आफ्नो परिवारलाई खुसी र सुखी पार्ने सपना बोकेर विदेशीएको हुन्छ । किन हामी देशमा बस्न सकिरहेका छैनौ । यसको कारण हाम्रो देशमा रोजगारीको अवस्था राम्रो नहुनु नै हो ।
अस्थिर सरकार, राजनीतिक खिचातानीले गर्दा उत्पन्न भएको असहज परिस्थितीले गर्दा नै आज हामी यहाँ छौ । हामी आफ्नो देशमा भएको समस्याले गर्दा त्यो समस्यालाई समधान गर्ने विकसित देशमा गई त्यहाको प्रविधि ज्ञान शिप, राम्रो संस्कृति आदि आर्जन गरी भविष्यमा त्यो सिकेको सीप र ज्ञानलाई विकासोन्मुख देश नेपालको दिगो विकासमा सदुपयोग गर्ने अठोट नेपालको विमानस्थलमा रहुन्जेल गरिरहेका हुन्छौं ।
जब हामी विदेश पुग्छौ त्यहा पुगे पछि हामी कुन कारणले विदेशिनु परेको थियो त्यो भुल्छौ अनि फेरि तिनै नेपालमा भएका सवै राजनीतिक दलका प्रवास कमिटी गठन गरी नेपालमाभन्दा चर्को रूपमा राजनीति गर्न सुरू गर्छौ एकले अर्कोको खुट्टा तान्न थाल्छौ जसरी पनि अर्कोलाई तल पार्ने म्याराथुन सुरू गर्छौ अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहदैनौ किनकी हामीले त्यही नेपालको विकृत राजनीतिक संस्कार वोकीरहेका छौ । हाम्रो वीर नेपाली बहादुरी यस्तै मा देखाउछौ ।
अझ दुखको कुरा एउटा कुनै पार्टीको नेता विदेश आउँछ तर उ एयरपोर्टबाटै फर्कनु पर्छ वा घन्टौ स्पस्टिकरण दिनुपर्छ । यो विषयलाई लिएर हामी यति बहस र आलोचना गर्न लाग्छौ यसको कुरा नगरौ । हामी हरेक दिन रात सामाजिक सन्जाललाई दुषित बनाउँदै एक अर्काप्रति दोषारोपण गरी हाम्रो धेरै समय विताउने गरेका छौ । राष्ट्रियताको कुरा त हामी भुल्छौ ।
वास्तवमा परदेशमा हामीले खुलेर राजनीति गर्न मिल्छ ? जहाँसम्म मलाई लाग्छ पार्टीको सांगठनिक गतिविधि गर्न नेपालको पार्टीकै नामबाट र चुनावी चिन्हबाट मिल्दैन त्यो सम्बन्धित देश अनुसार फरक पनि पर्छ तर कुनै निश्चिततः उद्देश्य राखि नेपालीहरूको हकहितको लागि, सामाजिक काम गर्ने उद्देश्य राखि एनजीओ जस्तै गरि भने खोल्न मिल्छ र खोलेका पनि छौ । त्यसो भए हाल प्रवासमा रहेका यी राजनैतिक दलका भातृ संगठनका कमिटीहरू र तिनलाई हाक्ने व्यक्ति कसरी काम गरिरहेका छन ? कमिटी कसरी चलेका छन ? सबैभन्दा पहिले त हरेक नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न भनौं अधिवेशन गर्न नेपालबाट सम्बन्धित व्यक्तिले आफू निकटका नेता र उनका परिवारलाई जापान वोलाउँछन र त्यही नेताको शत्तिm प्रयोग गरी पद आफ्नो पोल्टामा पार्दछन । नेपालबाट आएका नेता पनि राम्रालाई हैन हाम्रालाई अनि भोलि जापान आउँदा टिकट कासटदिने यसो आवश्यक परेका वेला कहिले काही आफस्लाई सहयोग पठाउने खालकालाई नै नेतृत्व दिन तयार हुन्छन । अरू कुनै योजना हुँदैनन् ।
मेरो जापनको वसाईबाट मैले देखेको यही हो । यिनमा अध्ययनशीलता खासै देखिन । राजनैतिक संस्कार पनि खासै देखिन धेरै कुराको कमी देखिन्छ । त्यसै भएर होला नेतृत्वले कुनै उपलब्धिमुलक काम केही गरेका छैन । कुनै दीर्घकालीन योजना छैनन् ।
अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रवासमा राजनीति र प्रवासीहरूको भूमिका विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले सबै पार्टीका भातृ संगठनले सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्नु जरूरी छ । सक्षम नेतृतवले मात्र सकरात्मक परिवर्तन गर्ने काम गर्न सक्छ । यो सक्षम नेतृत्वलाई निम्न कुराको ज्ञान हुन आवश्यक ठान्दछु ।
हामीले प्रवासमा आएर किन र के का लागि राजनीति गर्दैछौ ? हामीले गरेको राजनीतिले नेपालमा रहेको आफ्नो पार्टीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? हाम्रो मुल्यांकन पार्टीले कसरी गर्छ ? हामीले गरेको राजनीतिले प्रवासमा रहेका सामान्य नागरिकलाई कस्तो सहयोग गर्छ ? अनि हामीले यहाँबाट आफ्नो देशलाई समृद्द्ध वनाउन कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? हामीले हाम्रो देशको पहिचानको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ ? विद्यार्थीहरूलाई परेका समस्या समधान कसरी खोज्छौ ? कामदारका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छौ ? ठगीका मुद्दा कसरी समधान गर्छौ ? एक नेपाली नारीलाई नेपालीबाटै हुने यौन शोषणबाट मुत्तm गर्न के गर्छौ ? राजदुतावाससंग समन्वयन गरी सम्बन्धित देशको सरकारी क्षेत्र र नागरीकसंग कसरी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कोशिस गर्छौ ? नेपालको पहिचान, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कस्ता रणनीति अपनाउछौ ? आदि इत्यादी धेरै मुद्दाहरूलाई व्यापक रूप छलफल गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
राजनीतिक दलका भातृसंगठनभित्र पनि विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ । सबैभन्दा पहिले वौद्धिक व्यतित्वहरूको खोजी गरी एक कुशल टिम वनाउनु आवश्यक छ । त्यो विषेशज्ञको टोलीले गहन रूपमा छलफल गर्छ र गर्न सकिने काम र योजना नेतृत्वलाई बुझाउँछ । अनि त्यही बमोजिम काम अगाडि बढाउनुको विकल्प हुँदैन ।
हुनतः राजनीतिकर्मीले सधै आफ्नो संगठन विस्तार जस्तै सदस्यता विस्तार, आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षण जस्ता काम गर्नु नै पर्छ । हो आफूहरूले विस्तार गरेका यी सदस्यहरू र निर्माण गरेका कमिटीहरूलाई अब नेपालबाट बोलाएका नेताको भाषण सुन्ने, चियापान, शुभकामना कार्यक्रममा भाग गराउने मात्र हैन कि उनीहरुले कमाएको रकमलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण र योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अब कार्यक्रमहरुमा नेपालका नेता हैन विज्ञ वोलाउ अब नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन त्यसबारे विश्वभरबाट अभियान चलाउ र हरेक गाउँ, टोलबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौं चाहे त्यो ठूलो व्यवसाय होस् या सामान्य व्यवसाय । हामीले गर्न सकिने लगानी सामान्यतय कृषि, जलविद्युत, पशुपालन, अन्य साना तथा मझौला उद्योग पर्दछन ।
यो त भयो देशमा गर्न सक्ने केही काम । अब विदेशमा बसेर नेपालको पहिचानका लागि के गर्न सकिन्छ त ? केही समय अगाडि नेपालबाट आउनुभएका नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य युवराज कार्कीले सारै मनछुने कुरा गर्नु भएको थियो ।अब प्रवासमा रहेका हरेक प्रवासीहरू राजदूत हुन् । अब राजदुतावासमा वस्ने एक राजदूतले मात्र केही गर्न सक्दैन त्यसैले सबै राजदूत नै हो भन्ने सोचेर आफ्नो देशको पहिचानको लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । हामीले जो संग जति क्षमाता छ त्यहि बमोजिम त्यो देशको नागरिक जस्तै (जापानीज)संग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको संस्कृति, पर्यटकीय क्षेत्रका बारे जानकारी गराउने अनि नेपाल घुम्न आउन निम्ता दिने । यसो गरिएको खण्डमा हाम्रो देशको मान र सान बढ्छ । साथै हाल जापानमा ७५ हजार नेपाली छौं हामी सबैले एकएक जना जापानीज साथी बनाई नेपालबारे जानकारी गराई नेपाल भ्रमण गराइयो भने देशको पर्यटन क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने छ र त्यसको लाभ राष्ट्र निर्माणमा पुग्ने छ ।
यसरी नै सबै देशमा बस्ने नेपालले यसरी नै काम गर्नु पर्छ । विदेशीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण हामीले नै मिलाउने हो । हाम्रो देशको हरेक जातजातिको संस्कृतिबारे विदेशीलाई जानकारी गराउने र आफ्नो पहिचान दिने काम गर्नुपर्छ । आफू बसेका हरेक सहरमा नेपालीहरू मिलेर नेपाल फेष्टिवल जस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ यो हाम्रो राजनीति कार्यक्रमा हुनुपर्छ । हामीले प्रवासमा वसेर हाम्रो राष्टियता कहिले विर्सनु हुँदैन आज हामी नेपाली भएकै कारण हरेक देशका विमानस्थलमा अपमानित बन्नुपरेको छ यो सबै हामी आर्थिक रूपमा कम्जोर भएको कारण हो । त्यसैले अब हामी प्रवासीहरूले देशलाई गर्ने सहयोग निम्न बमोजिम हुनपर्छ । र राजनीतिक दलका भातृ संगठनले पनि यही अनुसार बढ्नु पर्छ ।
१. विषेशज्ञहरूको टोली निर्माण गर्ने । समृद्ध नेपाल निर्माण सम्बन्धी सेमीनार, गोष्ठी गर्ने र त्यहा बाट निक्लिएको निचोड़ देशमा पठाउने जसले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सरकारलाई सहयोग पुगोस,
२. साना साना पूजिहरूको संकलन र परिचालन गर्ने,
३. प्रवासमा भएका सबै प्रवासीहरू राजदूत हो त्यसैले प्रत्येक नेपालीहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकोस्,
४. हाम्रो अस्तित्व र पहिचान जोगाउने कामको प्रभावकारी कार्यन्वयन,
५. सबै जात जातिको संस्कृतिहरू जोगाउ खालका कार्यक्रम,
६. सामुहिक लगानी,
७. परदेशमा भएका सबै समाजहरूबीच भाइचारा र वन्धुत्वक़ो भावनालाई समेटेर अगाडी बढ्ने कार्यक्रम,
८. प्रत्येक नेपाली एक जनाले एक जना विदेशीलाई नेपाल भ्रमण गराउने,
९. राजदूतावाससंगको सहकार्यमा ठूला प्रोजेक्टहरूलाई नेपालमा लगानी गराउन पहल गर्ने,
१० सकेसम्म प्रविधि सिक्ने र त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने ।
नेपाल बनाउने हाम्रै दायित्व र कर्तब्य हो भन्ने कुरालाई मूल मन्त्र बनाएर विदेशमा रहेका हामी सबै अनि राजनीतिक दलका संगठन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लागि परौ । अब एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउन छोडौं ।
सुकेको छैन हिरोसिमा–नागासाकीको आणविक घाउ
बालबालिकालाई यन्त्रमा भुलाएर हामीले कस्तो बाटो देखाउँदैछौं ?
यसकारण पाउनु पर्छ-बिदेशिएका नेपालीले मताधिकार